Fandefasana ny kaonty zanabolana fizahantany ho an'i Saint Lucia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fandefasana ny kaonty zanabolana fizahantany ho an'i Saint Lucia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Saint Lucia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fikambanan'ny Hotel St Lucia sy ny fizahantany Ny tale jeneralin'ny Noorani M. Azeez dia nanambara androany ny fananganana ny kaonty Satelitizan'ny fizahantany ho an'ny firenena.
Saint Lucia dia firenena nosy Karaiba Atsinanana miaraka amn'ny tendrombohitra mitete tampoka, ny Pitons, eo amin'ny morony andrefana. Ny morontsiraka misy ny morontsiraka volkano, toerana fisitrika amoron-dranomasina, trano fandraisam-bahiny lafo vidy ary tanàna fanjonoana. Ny làlambe any anaty ala tropikaly dia mitarika any amin'ny riandrano toa ny Toraille 15m avo, izay manondraka hantsana mankany anaty zaridaina. Ny renivohitra Castries dia seranan-tsambo fitaterana malaza. Saint Lucia fizahantany no indostria lehibe indrindra any St.Lucia
Ny firafitry ny kaontin'ny zanabolana fizahan-tany dia miankina amin'ny fifandanjana ankapobeny misy eo amin'ny toekarena eo amin'ny fitakiana vokatra vokarin'ny fizahan-tany sy ny famatsiana azy ireo.
Ny TSA dia mamela ny firindrana sy ny fampihavanana ny statistikan'ny fizahantany amin'ny fomba fijery ara-toekarena (Kaontim-pirenena). Izany dia ahafahana mamorona angon-drakitra ara-toekarena fizahan-tany (toy ny GDP mivantana momba ny fizahan-tany) izay azo ampitahaina amin'ny statistikan'ny toekarena hafa. Ny tena fomba ifandraisan'ny TSA amin'ny lojika SNA amin'ny fampifanoherana ny angona avy amin'ny ilain'ny fangatahana (ny fahazoana entana sy serivisy ataon'ny mpitsidika mandritra ny diany fizahan-tany) miaraka amin'ny angona avy amin'ny lafiny famatsiana ny toekarena (ny lanjan'ireo entana sy serivisy novokarin'ny indostria ho setrin'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika).
Ny TSA dia azo jerena ho toy ny andiana latabatra famintinana 10, izay samy manana ny angon-drakitra misy ao aminy:
♦ fandaniana fizahan-tany miditra, fizahan-tany ary fandaniana fizahan-tany any ivelany,
♦ fandaniana fizahan-tany anatiny,
♦ kaonty mpamokatra indostrian'ny fizahantany,
♦ ny Gross Value Add (GVA) sy ny Gross Domestic Product (GDP) azo avy amin'ny fizahan-tany,
♦ fanjifan'ny governemanta ary
♦ famantarana tsy miankina amin'ny vola.
Ny tale jeneralin'ny SLHTA Noorani M. Azeez dia naneho ny fahitany ny famoahana ny kaonty zanabolana fizahan-tany om Saing Lucia anio ao amin'ny Hewanorra House, Sans Souci, CASTRIES:
Taorian'ny fikarohana sy famakafakana nandritra ny folo taona mahery, dia niaiky ny ankamaroany fa i Karaiba no faritra miankina amin'ny fizahan-tany indrindra eto an-tany. Na ny orinasam-panjakana na ny sehatra tsy miankina miainga amin'ny World Travel and Tourism Council, The Caribbean Tourism Organisation ary ny Caribbean Hotel and Association Association dia nanao ireo fanambarana ireo tamin'ny fotoana iray na hafa, mba hampisondrotra ny maha-zava-dehibe ny indostria amin'ny fisintomana mivantana ny vahiny fampiasam-bola, miteraka asa, mitaiza fifandraisana ary mandrisika ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina manoloana ny fitomboana sy ny fampandrosoana.
Nandritra izay folo taona lasa izay, ity mpamily lehibe toekarena Karaiba ity dia nampiseho ny fahaizany miatrika ny fikorontanana ara-toekarena sy ny toetrandro, mamela ny fotoana fanarenana haingana ho an'ireo fanjakana mandroso nosy kely ravan'ny rivodoza sy ireo loza voajanahary hafa. Na eo aza ny rivo-doza, ny horohoron-tany ary ny tsy fandriam-pahalemana politika amin'ny faritra sasany, ny tombontsoa azo avy amin'ny fizahan-tany dia mazava ho azy fa tsy azo ivalozana ankehitriny. Fa ahoana ny vidiny mifandraika amin'izany fiankinan-doha izany?
Rehefa mitombo ny fahatongavan'ireo mpizahatany ary mifamatotra hatrany ny harinkarena sy ara-tsosialy, dia tokony hifantoka amin'ny fiheverana avo lenta kokoa ny eritreritsika. Afaka manampy ny tanorantsika hamorona harena ve ny fizahantany? Tena afaka manome hery ny mpiasa ambany sy mahay ve ny fizahantany mba hahatratrarana sy hitazomana ny fiainana antonony-maharitra? Mahavita mikolokolo fampiroboroboana orinasa kely ve ny fizahantany? Ary afaka manampy antsika ve ny Fizahan-tany hamela lova ara-kolontsaina, zavakanto, tontolo iainana ary ara-tsosialy matanjaka ho an'ny zanatsika?
Amin'ny alàlan'ny fandrefesana io fitomboana sy fiankinan-doha marina io ihany no hahafantarantsika tsara, ny tena fiantraikan'ny fizahantany, ary amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny fizahan-tany ihany no ahafahantsika misambotra ny faharanitan-tsaina hitarika fanavaozana sy fahaiza-mamorona hanaisotra tanteraka ny fampanantenan'ny fizahan-tany.
Ny kaonty amin'ny zanabolana fizahantany (TSA) dia nanjary mpitondra fenitra sy fitaovana lehibe amin'ny fandrefesana ara-toekarena ny fizahantany. Novokarin'ny World Tourism Organization (UNWTO), ny United Nations Statistics Division ary ny mpiara-miasa vitsivitsy manerantany, ny TSA dia mamela ny firindrana sy ny fampihavanana ny statistikan'ny fizahantany, manampy anay handrefy ny fihinanana entana sy serivisy ataon'ny mpitsidika sy ny famatsiana ao an-toerana entana sy serivisy hanatanterahana izany fangatahana izany. Hitanay fa zavatra iray ny fitomboan'ny tonga, fa ny fitomboan'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika kosa dia mety ho zavatra hafa.
Te hidera ny Minisiteran'ny Fizahan-tany, ny fampahalalam-baovao sy ny fampielezam-peo, ny kolontsaina ary ny indostrian'ny famoronana ary ny mpiaramiasa amin'ny sehatra hafa ho an'ny daholobe noho ny ezak'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny hetahetan'ny Kaonty Satelitizika momba ny fizahan-tany.
Ary ankehitriny fa zava-misy izy io, ahoana no anaovantsika azy io?
Ny fanohanana ny sehatra tsy miankina sy ny fandraisana anjara mavitrika dia ampahany manan-danja amin'ny fampitahana hahazoana antoka ny fahombiazana.
Amin'ny alàlan'ny fanomezana sy famakafakana angon-drakitra, azontsika atao izao ny mitanisa ireo anjara biriky fampiasan'ny mpitsidika ny toekarentsika. Amin'ny alàlan'ny fahatakarana tsara kokoa ireo lamina fihinanana ireo dia afaka mandrisika ny fanavaozana, ny famoronana ary ny fanovana eo amin'ny sehatra tsy miankina isika. Ity indray dia manentana ny hetsiky ny sehatra ho an'ny daholobe mba hahazoana loharanom-bola sy famatsiam-bola ho an'ny tetikady politika vaovao momba ny fizahantany. Miara-miasa, ny sehatra tsy miankina sy ny daholobe dia afaka mampitombo ity fifandraisana misy eo amin'ny fiaraha-monina ity mba hametrahana lasibatra ara-tsosialy sy toekarena maharitra amin'ny paikady fampandrosoana ny orinasa.
Herintaona lasa izay, ny SLHTA dia namaly ny antson'ny minisiteran'ny fizahantany hizara ny hevitray momba ny fampidirana ny TSA. Nivory tamim-pahavitrihana ireo mpikambana ao amin'ny SLHTA mba hahatakatra tsara kokoa ny andraikitra atrehiny sy hanome ny fanohanantsika ilay hetsika. Hatreto dia mbola tsy nesorina izao fanapahan-kevitra izao. Ny SLHTA dia dodona amin'ny famakafakana ny angon-drakitra TSA sy ny fahatakarana ny fomba hanampiana antsika hanatsara ny famokarana, hampitombo ny fifaninanana ary hanatsara ny vinan'asa ho an'ireo matihanina momba ny fizahantany.
Ao amin'ny fandalinana maro momba ny fiantraikan'ny TSA, ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina dia nekena ho mpiorina lehibe amin'ny fahombiazan'ny tahirin-kevitra sy ny fifanakalozana vaovao. Ity fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina ity koa dia antony iray lehibe hamaritana ny fahombiazan'ny toerana fizahan-tany.
Manantena izahay fa hitombo hatrany ny TSA ary ho lasa ampahany amin'ny rafitry ny kaontim-pirenena mandrisika ny fampifangaroana ireo tanjona sy paikady isankarazany.
Ny fanamby voalohany ataontsika dia tsy isalasalana fa ao ny fisian'ny loharanom-pahalalana, ny faharetany ary ny fahatokisany. Na izany aza, na eo aza ny fanoloran-tenantsika eo amin'ny fiaraha-miasa hahazoana ny angon-drakitra, dia tsy maintsy mijanona ho tapa-kevitra ihany koa isika amin'ny fizarana ny zavatra hita. Amin'ny fanaovana izany dia ho hitantsika fa mora kokoa ny miteny ny marina amin'ny fahefana ary manolo-tena amin'ny fanapahan-kevitra sarotra ilaina amin'ny fampiasana ny fampanantenan-karena amin'ny fandraisana vahiny sy fizahan-tany.
Momba an'i Noorani Azeez:
CEO an'ny SLHTA Noorani Azzez
Noorani Azeez ao anatin'ny portfolio-ny amin'izao fotoana izao amin'ny maha Chief Executive Executive ao amin'ny St. Lucia Hospitality and Tourism Association (SLHTA), dia voampanga amin'ny famolavolana drafitra stratejika sy ny fanajariana indray ny rafitra sy ny rafitra fandaminana mba hiantohana ny anjara asa mavitrika kokoa amin'ny fizahan-tany fanentanana sy fanatsarana ny famokarana ataon'ny Fikambanana sy ireo mpikambana ao aminy.
Teo ambanin'ny portfolio marobe nandritra ny sivy taona lasa, Noorani no nanamora sy nitarika ny famoronana mahomby sy fitantanana ny:
Tahiry fampivoarana ny fizahan-tany an'ny SLHTA izay nanohana tetik'asa zato mahery natao hananganana faharetan'ny fiarahamonina, hanohanana ny fiarovana ny tontolo iainana ary hametrahana fifandraisana eo amin'ny fizahan-tany sy ny indostria hafa
Ivotoerana fanofanana momba ny fandraisam-bahiny izay nanofana mpiasa indostrialy fizahan-tany 700 nandritra ny taona nanokafana azy tamin'ny 2017
Ivotoerana fianarana fiteny vahiny eo an-toerana miaraka amin'ny masoivohon'i Mexico sy ny oniversiten'i Quintana Roo
Fandaharam-pianarana ho an'ny tanora ho an'ny tanora izay nanolotra fiofanana ho an'ny fizahan-tany ho an'ny tanora tsy an'asa maherin'ny 550 mitady asa amin'ny fandraisana vahiny.
Ny tranokala fanadiovana virtoaly virtoaly izay mampiasa sehatra What App ho forum fifanakalozana ho an'ny tantsaha sy ny hotely. Tantsaha maherin'ny 400 sy trano fandraisam-bahiny 12 no mandray anjara amin'ilay programa ka nahatonga ny varotra efa ho 1 tapitrisa dolara ny vokatry ny fambolena any an-toerana nandritra ny taona voalohany niasany. Nahazo loka sy fankatoavana iraisam-pirenena indrindra avy amin'ny CHTA sy WTTC ny tetikasa.
Nifampiraharaha tamin'ny fametrahana ny drafitra fiantohana ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa SLHTA ho an'ny mpiasan'ny indostria amin'ny alàlan'ny SLHTA mba hahafahan'ny fidirana amin'ny fiantohana ara-pitsaboana ho an'ireo mpiasa izay tsy zakan'ny orinasan'izy ireo manome fiantohana ho azy ireo. Hatreto dia mpiasa maherin'ny 2000 no mandray anjara amin'ilay programa izay misy tombony lehibe kokoa noho ny drafitra rehetra any an-toerana ho an'ny sarany ambany indrindra.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny SLHTA, Noorani dia talen'ny Training and Development ho an'ny Sandals Resorts International. Ny andraikiny tamin'ity lahatsoratra ity dia nahitana fanofanana ilaina amin'ny fanombanana ireo mpikambana ao amin'ny ekipa ary fanomezana fiofanana sy tari-dàlana ho an'ireo mpiasa an-tserasera sy ireo matihanina amin'ny fitantanana amin'ny sehatry ny lohahevitra isan-karazany, na eo an-toerana izany na any amin'ny faritra, mba hiantohana ny tsy fitoviana amin'ny serivisy serivisy.
Talohan'io dia niasa ho General Manager tao amin'ny National Skills Development Center Inc. (NSDC) nandritra ny dimy taona mahery. Tao amin'ny NSDC dia izy no tompon'andraikitra tamin'ny fifampiraharahana tamin'ny famatsiam-bola ho an'ny mpanome sy ny tetik'asa fitantanana ny fampiofanana ireo tanora tsy an'asa amin'ny fandraisana vahiny sy ny sehatry ny fianarana hafa.
Nahazo mari-pahaizana amin'ny sehatry ny fitantanan-draharaha sy ny traikefa amin'ny maha-manam-pahaizana momba ny fampandrosoana sy ny fitantanana tetikasa, i Noorani dia manome lanja ny ezaka mahatohitra ny fiarahamonina, ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ary ny fandaharam-pivoarana nasionaly amin'ny alàlan'ny fahaiza-manao eo amin'ny samy olombelona, ​​ny fitantanana asa mahomby eo amin'ny fandaminana ary ny toetra tsy mendrika. Ny fotoana ahafahana manome hery ny fampandrosoana tanteraka ny fanjakana an-dàlam-pandrosoana kely ary misy akony eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika dia ny ezaka izay manala ny filàny. Gasper George - Solontenan'ny SLASPA
Vaovao misimisy momba an'i Saint Lucia.